Maitiro Ekuvakazve Re-Engagement Campaign Yevasingaite Vanyori Martech Zone
Isu munguva pfupi yapfuura takagovana infographic yekuti ungaita sei dzosera yako email yekubatanidzwa kukwezva chiyero, nedzimwe nyaya dzedzidzo uye nhamba pane zvinogona kuitwa pamusoro pavo. Iyi infographic kubva kuemail Monks, Re-Engagement Maemail, inozvitora zvakadzika zvakadzama zveruzivo kuti ipe chirongwa chaicho chemushandirapamwe wekudzorera yako kuora kwekuita kweemail.
Avhareji email rondedzero inoora ne25% gore rega. Uye, Zvinoenderana ne 2013 Kushambadzira Sherpa mushumo, 75% ye #email vanyoreri havashandi.
Ipo ivo vatengesi vachiregeredza chikamu chisina kukwana chemaimeri yavo rondedzero, ivo vanofuratira mhedzisiro. Kuderera kwekubata mitengo kunorwadza inbox yekuisa mareti, uye maemail asina kushandiswa anogona kutonhorwa neIPs kumisikidza misungo yekuziva spammers! Izvi zvinoreva kuti vakanyoresa vasina kurara vari kukanganisa kana vanyori vako veemail vanobatanidzwa vari kuona maemail ako.
Kugadzira Re-Engagement Campaign
Chikamu vanyori vasina kuvhura, kudzvanya kana kushandurwa kubva kune yako email vanyoreri runyorwa mugore rapfuura.
hunotsigira iyo email kero dzechikamu icho kuburikidza ne email ine mukurumbira yekusimbisa sevhisi.
tuma email yakajeka uye yakapfupika inokumbira kunyorera kupinda-mukati zvakare kune yako email email rondedzero. Ive neshuwa yekusimudzira mabhenefiti ekugamuchira yako email.
mira vhiki mbiri uye kuyera mhinduro yeemail. Ino inguva yakaringana yevanhu vari pazororo kana izvo zvinofanirwa kujekesa yavo inbox uye vape nzvimbo yako meseji.
Tevera nenyevero yechipiri yekuti anyorese emaimeri achabviswa kubva kune chero kutaurirana kunze kwekunge vapindazve. Ive neshuwa yekusimudzira iyo bhenefiti yekugamuchira email kutaurirana kubva kukambani yako.
mira mamwe mavhiki maviri uye kuyera mhinduro yeemail. Ino inguva yakaringana yevanhu vari pazororo kana izvo zvinofanirwa kujekesa yavo inbox uye vape nzvimbo yako meseji.
Tevera ine meseji yekupedzisira yekuti munyoreri weemail wabviswa kubva kune chero kutaurirana kunze kwekunge vapindazve. Ive neshuwa yekusimudzira iyo bhenefiti yekugamuchira email kutaurirana kubva kukambani yako.
Mhinduro kusarudza kudzoka mukati kunofanira kutendwa uye iwe ungatoshuvira kuvakumbira ivo ruzivo pane izvo zvingavaite kuti vazvibatanidze zvakadzama neako marashi.
Inactive vanyori vanofanirwa kubviswa kubva pane yako (s) zvinyorwa. Nekudaro, iwe unogona kuda kuvaendesa kumushandirapamwe wekudzokorodza pane vezvenhau, kana kunyangwe mushandirapamwe wekushambadzira wakazara kuti uvakunde zvakare!
Iyo infographic kubva kuemail Monks inopawo mamwe maitiro akanakisa ekuwedzera mikana yako yekuwana vako vasingaite vanyori vanonyoresa zvakare:
Tags: email infographictsamba yeemail kukwezvatsamba yeemail kuoraemail chinyorwa chengetedzoemail mamongiemail kusarudza-mukatiemail optin mushandirapamweemail munyoreri zvekare kuitaemailmonkssei kutimushandirapamwe wekuita zvekarere-kubatanidzwa email